Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah shaqadiisa - abuur, hadal, noo bedel, na dhex dego, naga dhex shaqee. In kasta oo Ruuxa Quduuska ahi uu tan sameyn karo annaga oo aan aqoon lahayn, haddana waa mid waxtar iyo muhiimad leh innaga leh inaan waxbadan ka baranno.
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay astaamaha Ilaah, waa mid la siman Ilaah oo wuxuu sameeyaa waxyaalo Ilaah kaliya sameeyo. Sida Eebbe oo kale, Ruuxa Quduuska ahi waa qoduus - sidaas waa u qumman tahay inay dembi tahay in aflagaadeeyo Ruuxa Quduuska ah sida Wiilka Ilaah (Cibraaniyada 10,29). Aflagaado, iyo cayda Ruuxa Quduuska ahi waa dembi aan la cafin karin (Matayos 12,32). Tan macnaheedu waa in ruuxu yahay qoduus dabiici ahaan, oo ka duwan macbudka, in la sheegay inay qoduus tahay.
Sida Eebbe, Ruuxa Quduuska ahi weligiis waa waara (Cibraaniyada 9,14). Sida Eebbe oo kale, Ruuxa Quduuska ahi meel kasta wuu yaal (Sabuurradii 139,7: 9). Si la mid ah Ilaah, Ruuxa Quduuska ahi wax walba wuu ogyahay (1 Korintos 2,10: 11-14,26; Yooxanaa). Ruuxa Quduuska ah ayaa abuuraya (Job 33,4; Sabuurradii 104,30) oo abuuraya mucjisooyin (Matayos 12,28; Rooma 15,18-19) wuxuuna ku biiriyaa shaqada Ilaah. Meelo badan ayaa tilmaamaya Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah inay yihiin ilaahnimo. Doodaha ku saabsan hadiyadaha ruuxiga ah, Bawlos wuxuu tixraacayaa qaab dhismeedka isbarbar socda ee Ruuxa, Sayid iyo Ilaah (1 Korintos 12,4: 6). Waraaqdiisa ayuu ku dhammeeyaa duco saddex-qaybood ah (2 Korintos 13,14). Butros wuxuu ku bilaabayaa warqad qaab kale oo saddex qaybood ah (1 Butros 1,2). In kasta oo tusaalayaashani aysan daliil u ahayn midnimada Saddexanka, haddana fikirradan way taageersan yihiin.
Qaaciddada baabtiisku waxay xoojineysaa astaamaha midnimada noocaas ah: "Ku baabtiisa magaca Aabaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah" (Matayos 28:19). Saddexda magac baa leh, oo tilmaamaya ahaansho, markii Ruuxa Quduuska ahi wax sameeyo, Ilaah baa sameeya. Markuu Ruuxa Quduuska ahi hadlayo, Ilaah ayaa hadla. Markii Ananiyas been ka sheegay Ruuxa Quduuska ah, Ilaah buu been u sheegay (Falimaha Rasuullada 5: 3-4). Butros wuxuu sheegayaa in Ananiyas been u sheegay uusan ahayn wakiilkii Ilaah, laakiinse uu u sameeyay Ilaah qudhiisa.
Bawlos wuxuu ku sheegay in Masiixiyiintu yihiin macbudka Ilaah (1 Korintos 3,16), mid kalena wuxuu leeyahay waxaan nahay macbudka Ruuxa Quduuska ah (1 Korintos 6,19). Waxaan nahay macbud aan ku caabudno ilaahnimadiisa mana ahan xoog shaqsiyeed. Markuu Bawlos qoray inuu innagu tahay macbudkii Ruuxa Quduuska ah, wuxuu muujinayaa in Ruuxa Quduuska ahi yahay Ilaah.
Haddaba Ruuxa Quduuska ah iyo Ilaah waa isku mid: "Laakiin markay caabudeen oo ay Rabbiga soomeen, ayaa Ruuxa Quduuska ahu wuxuu ku yidhi: Barnabas iyo Sawlos iigu sooca shuqulkii aan kuugu yeedhay" (Falimaha Rasuullada 13,2) , Halkan Ruuxa Quduuska ahi wuxuu adeegsadaa magacyo shaqsi ahaaneed sida Eebbe u isticmaalo. Sidoo kale, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu hadlayaa in reer Banii Israa’iil ay tijaabiyeen oo ay isku dayeen isaga oo leh: «Anoo cadhaysan ayaan dhaariyey: Inaanad nasashadayda ku soo noqon. (Cibraaniyada 3,7: 11). Laakiin Ruuxa Quduuska ah maahan magac kale oo Eebbe loo yaqaan. Ruuxa Qudduuska ahi wuu ka madax bannaan yahay Aabaha iyo Wiilka, sida ka muuqata baabtiiskii Ciise (Matayos 3,16: 17). Saddexda waa kuwo madaxbanaan oo haddana mid ah, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu sameeyaa shaqada Ilaah ee nolosheena. Waxaan ku dhalannay kana timid xagga Ilaah (Yooxanaa 1:12), oo la mid ah dhalashada Ruuxa Quduuska ah (Yooxanaa 3,5). Ruuxa Quduuska ahi waa habka Ilaah noogu dhex jiro (Efesos 2:22; 1 Yooxanaa 3,24:4,13;). Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhexjiraa (Rooma 8,11:1; 3,16 Korintiyos) - iyo maxaa yeelay ruuxu inagu dhex jiro, waxaan sidoo kale dhihi karnaa Ilaah baa inagu dhex jira.
Ruuxa Quduuska ahi waa shaqsi
Baybalku wuxuu ku sharaxayaa Ruuxa Quduuska ah astaamaha aadanaha:
Ruuxu wuu nool yahay (Rooma 8,11:1; 3,16 Korintos)
Maskaxda ayaa hadasha (Falimaha Rasuullada 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timoteyos 4,1; Cibraaniyada 3,7 iwm)
Maskaxda ayaa mararka qaar adeegsata magac-shaqsiyeedka "I" (Falimaha Rasuullada 10,20; 13,2)
Maskaxda ayaa wax looga qaban karaa, la isku dayaa, la barooran karaa, la caayaa oo la kadeedaa (Falimaha Rasuullada 5,3: 9; 4,30; Efesos 10,29:12,31; Cibraaniyada; Matayos)
Maskaxda ayaa hagisa, dhexdhexaadinaysa, wicaysa oo tilmaamaysa (Rooma 8,14:26; 13,2; Falimaha Rasuullada 20,28;)
Rooma 8,27 waxay ka hadlaysaa madaxa ruuxa. Ruuxu go'aan ayuu gaaraa - Ruuxa Quduuska ahi go'aan ayuu gaadhay (Falimaha Rasuullada 15,28). Maskaxda ayaa garata oo shaqeysa (1 Korintos 2,11:12,11;). Isagu ma ahan awood aan shakhsiyan ahayn, Ciise wuxuu ugu yeeray Paraclet Ruuxa Quduuska ah - oo loo tarjumay inuu noqdo Caawiyaha, La-Taliyaha, ama Qareenka.
"Oo anna waxaan weydiisan doonaa Aabbaha oo isna wuxuu idin siin doonaa qalbi qabow kale inuu isagu weligiin kula joogi doono. Waad garanaysaa isaga maxaa yeelay wuu kula joogi doonaa wuuna ku sii jiri doonaa » (Yooxanaa 14,16: 17) .
La-taliyihii ugu horreeyay ee xerta wuxuu ahaa Ciise. Sida uu wax u barayo, marqaati furayo, u cambaareynayo, u hago oo qaawinayo runta (Yooxanaa 14,26:15,26; 16,8:13; 14;). Dhamaan kuwan waa doorar shaqsiyeed. Yooxanaa wuxuu isticmaalaa qaabka masariga ah ee erayga Griiga parakletos maxaa yeelay lagama maarmaan ma ahan in la isticmaalo foomka dhexdhexaadnimada. Yooxanaa 16,14 xitaa labka magac ahaaneed ee “isagu” waxaa loo adeegsaday ka dib markii eraygan dhexdhexaadnimada la adeegsaday. Way fududaan lahayd in loo beddelo magaca shaqsiga dhexdhexaad ah, laakiin Johannes ma uusan beddelin. Maskaxda waxaa loogala hadlaa "he". Si kastaba ha noqotee, naxwe ahaan waa wax aan muhiim ahayn. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim in Ruuxa Quduuska ahi leeyahay tayo shaqsiyadeed. Isagu ma aha awood aan shaqsi ahaaneed ahayn, laakiin waa caawiye caaqil ah oo rabaani ah oo inagu dhex jira.
Ruuxiga Axdiga Hore
Baybalku kuma jiro qayb cinwaankeedu yahay "Ruuxa Quduuska ah". Wax yar ayaan ka barannaa Ruuxa Quduuska ah halkan iyo halkaas marka buugaagta Kitaabka Quduuska ahi xusaan. Axdigii Hore wuxuu ina siinayaa aragti kooban. Maskaxdu waxay joogtay abuuritaanka nolosha (Bilowgii 1: 1,2; Job 33,4: 34,14;,). Oo Ruuxii Ilaah wuxuu Besaleel ka buuxsamay awooddii uu ku dhisi lahaa taambuuggii (Bilowgii 2: 31,3-5). Wuxuu dhammaystiray Muuse sidoo kale wuxuu soo maray 70kii oday (Bilowgii 4:11,25). Oo isagu wuxuu Yashuuca ka buuxiyey xigmad hoggaamineed, iyo Samsoon xoog iyo karti dagaal (Sharciga Kunoqoshadiisa 5; Richter [space]] 34,9; 6,34). Markaasaa Saa'uul Ruuxii Ilaah waxaa la siiyey Saa'uul wuuna qaatay mar kale (1 Sam. 10,6; 16,14). Ruuxu wuxuu Daa'uud siiyay qorshihii macbudka (1 Taariikhdii 28,12). Ruuxuna wuxuu nebiyada u waxyooday inay ku hadlaan (Tirintii 4; 24,2 Sam 2; 23,2 Taariikh 1; 12,18 Taariikh 2; 15,1; Yexesqeel 20,14; Sekaryaah 11,5; 7,12 Butros 2:1,21) .
Axdiga Cusub dhexdiisa, sidoo kale, wuxuu ahaa Ruuxa Quduuska ah ee dadka ka dhigay sida Elisabeth, Sakariyaas iyo Simecoon inay ku hadlaan (Luukos 1,41; 67; 2,25-32). Yooxanaa Baabtiisaha waxaa ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah tan iyo dhalashadiisii (Luukos 1,15). Shaqadiisa ugu muhiimsan waxay ahayd inuu ku dhawaaqo imaatinka Ciise Masiix, oo dadka ku baabtiisi doona biyo oo keliya maahee Ruuxa Quduuska ah iyo dab (Luukos 3,16).
Ruuxa Quduuska ah iyo Ciise
Ruuxa Qudduuska ahi aad buu u joogay oo wuxuu ku lug lahaa nolosha Ciise. Ruuxdii ayaa sababtay inuur (Matayos 1,20:3,16), jiifsada ka dib markuu baabtiisay (Mat.), oo u horseeday cidlada (Lk4,1) oo u oggolaaday inuu ku wacdiyo warka wanaagsan (Luukos 4,18). Ciise wuxuu jinniyada ku saarayaa gacan ka Ruuxa Quduuska ah (Matayos 12,28). Ruuxa Quduuska ah, wuxuu naftiisa u bixiyey allabari dembigii aadanaha (Cibraaniyada 9,14) iyo isla ruuxdii uu ka sarakacay kuwii dhintay (Rooma 8,11).
Ciise wuxuu baray in Ruuxa Quduuska ahi ka hadlay wakhtiyadii uu xertiisii ​​silcin jiray (Matayos 10,19: 20). Wuxuu u sheegay inay ku baabtiisayaan kuwa raacsan magaca magaca Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah (Matayos 28,19). Oo weliba wuxuu Ilaah siiyaa dadka oo dhan Ruuxa Quduuska ah markay wax weydiistaan (Luukos 11,13). Qaar ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Ciise ka hadlay Ruuxa Quduuska ah waxaa laga heli karaa Injiilka Yooxanaa. Marka hore dadku waa inay ku dhashaan biyo iyo ruux (Yooxanaa 3,5). Dadku waxay u baahan yihiin cusbooneysiin xagga ruuxa ah mana aha mid naftooda ka yimid, laakiin waa hadiyad ka timid xagga Ilaah. Xitaa haddii maskaxdu aysan muuqan, waxay isbedel ku sameyneysaa nolosheena (V. 8).
Ciise wuxuu kaloo baray: Ku alla kii harraadsanow, ii kaalay oo cab. Qof kasta oo igu rida, sida Qorniinku leeyahay, waxaa lahaan doona webiyo biyo nool ah oo jidhka ka baxa. Wuxuu waxaas kaga hadlay Ruuxa kuwa rumaysta isaga. waayo, ruuxii weli lama joogin; maxaa yeelay Ciise weli ammaanmay (Yooxanaa 7,37-39).
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu dhergiyaa harraad gudaha ah. Waxay noo saamaxaysaa inaan sameysanno xiriirka aan la leennahay Eebbe abuuray. Waxaan ku helnaa Ruuxa markii aan u nimid Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah oo fulinaya nolosheena.
Johannes ayaa yidhi «Waayo, Ruuxu weli ma jirin; maxaa yeelay Ciise weli ammaanmay (V. 39) . Ruuxu wuxuu horey u buuxiyay ragga iyo dumarka kahor nolosha Ciise, laakiin si dhaqso leh ayey ku imaan doontaa qaab cusub oo xoog badan - maalinta Bentakostiga. Ruuxa ayaa hadda la wada siiyey dhammaan kuwa ku barya magaca Rabbiga (Falimaha Rasuullada 2,38: 39). Ciise wuxuu xertiisii ​​u ballanqaaday in ruuxa runta ah ee ku dhex noolaan doona iyaga la siin doono (Yooxanaa 14,16-18). Ruuxa runta ahi wuxuu lamid yahay sidii Ciise laftiisu xertii u timid (V. 18) maxaa yeelay isagu waa Ruuxa Masiixa iyo Ruuxa aabaha - oo ay soo direen Ciise iyo Aabbuhu (Yooxanaa 15,26). Ruuxu wuxuu awood u siiyaa Ciise inuu u noqdo qof kasta oo shaqadiisu ku sii socoto, wuxuuna Ciise ballan qaaday in Ruuxu bari doono xertii uuna xasuusin doono wax kasta oo Ciise baray (Yooxanaa 14,26). Ruuxu wuxuu baray waxyaabo aysan fahmin ka hor sarakicidda Ciise (Yooxanaa 16,12: 13).
Ruuxu wuxuu ka hadlayaa Ciise (Yooxanaa 15,26:16,24;). Isagu ma xayeysiinayo naftiisa, laakiin wuxuu dadka u horseedaa Ciise Masiix iyo Aabaha. Isagu iskama hadlayo keligiis, laakiin sida aabbuhu doonayo uun (Yooxanaa 16,13). Way fiicantahay in ciise uusan nala sii joogin maxaa yeelay Ruuxku wuu ku shaqeyn karaa malaayiin dad ah (Yooxanaa 16,7). Ruuxu wuxuu dadka ku wacdiyaa oo u muujiyaa adduunka dembigooda iyo dembigooda wuxuuna buufiyaa baahidooda caddaaladda iyo caddaaladda (Aayadaha 8aad). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu dadka u tilmaamayaa Ciise inuu yahay xalka khaladkooda iyo isha ay ka helaan cadaaladda.
Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu sheegay in Ciise dadka ku baabtiisi doono Ruuxa Quduuska ah (Mark 1,8). Tani waxay dhacday maalintii Bentakostiga kadib sarakiciddiisa markii Ruuxu siiyay xertii xoog (Falimaha Rasuullada 2). Tan waxaa ku jira ku hadalka luqadaha ay ummadaha kale fahmaan (V. 6). Mucjisooyinka la midka ah ayaa sidoo kale dhacay waqtiyo kale markii Kaniisaddu ay sii weynaaneysay (Falimaha Rasuullada 10,44: 46-19,1; 6), si kastaba ha ahaatee, looma dhihin in mucjisooyinkan ay ku dhacaan dadka oo dhan ee helay caqiidooyin cusub oo Masiixiyiin ah.
Bawlos wuxuu leeyahay in dhammaan rumaystayaasha Ruuxa Quduuska ah lagu dhex sameeyo isku jidh, kaniisadda (1 Korintos 12,13). Ruuxa Quduuska ah waxaa lasiiyaa mid kasta oo rumaysta (Galatiya 3,14). Iyadoo aan loo eegin haddii mucjisooyinku dhacday iyo in kale, dhammaan rumaystayaasha waxaa lagu baabtiisaa Ruuxa Quduuska ah. Muhiim maahan in la raadiyo oo la rajeeyo mucjiso gaar ah si loo caddeeyo inaad ku baabtiisay Ruuxa Quduuska ah.
Baybalku uma baahna rumayste kasta in lagu baabtiiso Ruuxa Quduuska ah. Taa bedelkeed, rumayste kasta waxaa lagu dhiirigelinayaa inuu si joogto ah uga buuxsamo Ruuxa Quduuska ah (Efesos 5,18) sidaa darteed qofku wuu ka jawaabi karaa tilmaamaha Ruuxa. Xiriirkani waa mid socda mana ahan dhacdo hal mar ah. Halkii aan ka raadin lahayn mucjisooyin, bal aan Ilaah raadinno oo aan u oggolaano inuu go’aansado haddii iyo goortuu mucjisooyinku dhici doonaan. Bawlos badanaa wuxuu ku sharaxayaa xoogga Ilaah ee ma aha mucjisooyinka jirka ee dhacaya, laakiin isbedelka ku dhaca qofka noloshiisa - rajo, jacayl, dulqaad, adeeg, fahan, silica iyo wacdinta geesinimada leh (Rooma 15,13:2; 12,9 Korintos 3,7; Efesos 16; 18-1,11; Kolosay 28: 29; 2-1,7; 8 Timoteyos). Mucjisooyinkaas waxaa sidoo kale loogu yeedhi karaa mucjisooyinka jirka maxaa yeelay Ilaah wuxuu beddelaa nolosha dadka Falimaha Rasuullada waxay muujinayaan in Ruuxu taageeray koritaanka kaniisadda. Ruuxuna wuxuu dadka siiyay awood inay ku soo sheegaan oo ka marag furaan Ciise (Falimaha Rasuullada 1,8). Wuxuu xertiisii ​​u oggolaaday inay wax wacdiyaan (Falimaha Rasuullada 4,8,31:6,10;). Wuxuu amray mid ka mid ah Filibos iyo markii dambe qabtay (Falimaha Rasuullada 8,29:39;). Ruuxu wuxuu dhiirrigeliyay Kaniisadda oo wuxuu rakibay hoggaamiyeyaal (Falimaha Rasuullada 9,31:20,28;). Wuxuu la hadlay Butros iyo Kaniisada Antiyokh (Falimaha Rasuullada 10,19; 11,12; 13,2). Wuxuu ka shaqeeyay Agabus markii uu arkay abaarta oo uu horseeday Bawlos inuu cararo (Falimaha Rasuullada 11,28:13,9; 10). Isagu wuxuu kaxeeyey Bawlos iyo Barnabas markay jidka sii socdeen, (Falimaha Rasuullada 13,4: 16,6; 7) oo awood u yeeshay shirkii rasuullada ee Yeruusaalem inay go'aan ka gaaraan (Falimaha Rasuullada 15,28). Wuxuu Bawlos u diray Yeruusaalem oo uga digay arrintaas (Falimaha Rasuullada 20,22: 23-21,11;). Kaniisad ayaa jirtay kuna kortay shaqada Ruuxa Quduuska ah ee rumaystayaasha.
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay nolosha rumaystayaasha maanta:
Waxay noo horseedaa xagga toobadda waxayna na siisaa nolol cusub (Yooxanaa 16,8; 3,5-6)
Isagu wuu igu nool yahay, wax buu ina barayaa wuuna nagu hagayaa (1 Korintos 2,10: 13-14,16; Yooxanaa 17,26: 8,14; Rooma)
Waxaan kula kulannaa Kitaabka Quduuska ah, isagoo tukanaya iyo Masiixiyiinta kaleba isagu waa ruuxa xigmadda oo wuxuu naga caawiyaa inaan arrimaha ku eegno geesinimo, jacayl iyo is-xakameyn (Efesos 1,17:2; 1,7 Timoteyos)
Ruuxu wuu goynayaa qalbiyadeenna, wuu ina daayaa oo isagaa beddelaa (Rooma 2,29; Efesos 1,14)
Ruuxu wuxuu abuuraa jacayl iyo midhaha cadaaladda ee inaga dhex jira (Rom.5,5; Efesos 5,9; Galatiya 5,22-23)
Ruuxu wuxuu ina geliyaa kaniisadda wuxuuna naga caawiyaa fahamka inaan nahay carruurta Ilaah (1 Korintos 12,13:8,14; Rooma 16)
Waa inaan ku caabudno Ilaah ruux ahaan (Phil3,3; 2 Korintos 3,6; Rooma 7,6; 8,4-5). Waxaan isku daynaa inaan ka farxinno isaga (Galatiya 6,8). Markay na hogaamiso Ruuxa Quduuska ah, wuxuu ina siiyaa nolol iyo nabad (Rooma 8,6). Isaga ayaynu ku helnaa aabaha (Efesos 2,18). Wuxuu inaga caawiyaa daciifnimadayada wuuna na taageeraa (Rooma 8,26-27).
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu sidoo kale na siiyaa hadiyado ruuxi ah. Hogaamiyeyaasha kaniisada ayuu siiyaa (Efesos 4,11), dadka sameeya hawlaha aasaasiga ah ee adeegga jacaylka ee kaniisadda (Rooma 12,6: 8) iyo kuwa leh xirfado gaar ah hawlo gaar ah (1 Korintos 12,4: 11). Qofna hadiyad ma leh, haddiyad walbana lama siiyo qof walba (Aayadaha 28aad). Dhammaan hadiyadaha, ha ahaato mid ruuxi ah iyo in kale, waa in loogu adeegsadaa shaqada guud ahaan - Kaniisadda oo dhan (1 Korintos 12,7:14,12;). Hadiyad kasta waa muhiim (1 Korintos 12,22: 26).
Ilaa hadda, waxaan helnay hadiyaddii ugu horreysay oo Ruuxa, taas oo, si kastaba ha noqotee, ballanqaad badan ayey noo tahay mustaqbalka (Rooma 8,23; 2 Korintos 1,22; 5,5; Efesos 1,13-14).
Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah nolosheena. Wax kasta oo Ilaah sameeyo waxaa lagu sameeyaa Ruuxa Quduuska ah. Sidaa darteed Bawlos wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan la noolaano oo ku dhex noolaado Ruuxa Quduuska ah (Galatiya 5,25; Efesos 4,30; 1 Tesaloniika 5,19). Markaa aan dhagaysanno waxa Ruuxu Quduuska ahi leeyahay. Maxaa yeelay, markuu hadlayo, Ilaah ayaa hadlaa.